Ka Feejignoow Dhaqannada Aan Ku Wacnayn Maqaaxiyaha Iyo Goobaha Dadweynuhu Ku Kulmo | Salaan Media
Ka Feejignoow Dhaqannada Aan Ku Wacnayn Maqaaxiyaha Iyo Goobaha Dadweynuhu Ku Kulmo
August 25, 2019 | Published by: admin
Maqaaxiyaha iyo goobaha cuntada fudud ee dhalinyaradu isugu timaaddaa waa goobta saddexaad ee waqtiga ugu badan lagu qaato, marka laga yimaaddo shaqada iyo guriga, waana goobta uu qofku ka helo isdhexgalka bulsho iyo xidhiidhada ugu habboon ee uu sameeyo.
Maqaal ay dhowaan faafisay majaladda Readers Digest oo ka soo baxda dalka Maraykanka, ayaa qoraaga Isabel Tavares ay kaga hadashay qaar ka mid ah caadooyin ay sheegtay in dadka maqaaxiyaha yimaaddaa aad ugu dhaqmaa, oo ay fiican tahay in la iska daayo; waxaana ka mid ah:
Xidhiidhada Taleefanka ee Fiidyowga ah
In adiga oo maqaaxi jooga aad qof kala hadasho is-gaadhsiin fiidyow ahi waa caado aad u xun. Waxaa ka muuqata in aad tahay shakhi naftiisa uun raalli geliya. Agaasimaha mashaariicda ee shirkadda Access New York Metro, mudane Jordan Gary ayaa ku taliyey in ay fiican tahay in qofku uu dhawro anshaxa adeegsiga taleefanka, oo aanu noqon qof cod dheer ku hadla, sidaa awgeed ay muhiim tahay in qofku ogaado in aanay cidina diyaar u ahayn in ay sheekadiisa maqasho.
Miis keliya ha xidhan
Maqaaxiyuhu waxa ay u qaybsan yihiin kuwo marka hore u diyaarsan in dadku ay gaar u kala fadhiisan karaan si ciddii doonaysaa ay u hesho faq gaar ah, iyo kuwo dadweyne oo mar kasta cidhiidhi ah. Waa maqaaxiyaha loogu talagalay in dadweynuhu shaaha ka cabbaan wixii aan sheeko gaar ahayna ku dhammaystaan. Waxaa marar badan dhacda in qof jooga maqaaxi dadweyne oo cidhiidhi ahi haddana uu doono in uu miis gaar ah xidho, oo aanu jeclaysan in cid kale oo aanu garanaynin ay la wadaagto miiskaas. Waa hab-dhaqan keli danaystenimo, waxa ay caddaalad darro ku tahay meheradda oo u baahan in ay hesho meelo macaamiishu u fadhiistaan iyo macaamiisha oo doonaya in ay helaan fadhi. Wixii gaar kuu ah la doono meel gaar kuu noqon karta, dhibaatana kuma jirto in koox is wadataa ay fadhiisato hal miis oo aanay cid kale fakaak ka heli karin, laakiin weligaa iska jir in aad fadhiisato miis cid kale kula wadaagi karto, haddana aad dhibsato in laguula wadaago.
Dhawaqa / jaraska taleefanka gacanta
Dadka badankiisu ma jecla dhawaqa dheer, dananka ama dhawaqa uu jaraska taleefanku sameeyo marka ay cidi la soo xidhiidho ayaa ka mid ah dhawaqyada laga yaabo in aanay dadka qaar jeclaysan. Waxaa muhiim ah in aynu ogaanno in dhawaq aad taleefankaaga ku xidhatay ay dhici karto in qof kale uu dhibsado, gaar ahaan marka uu aad u dheeryahay. Si guudba dhawaqa taleefankaaga in aad gaabisaa waa ay fiican tahay, gaar ahaan marka aad joogto meelaha ay dadku isugu yimaadaanna waxaa qurux badan in uu noqdo dhawaq gaaban, guux ama ilays si adiga oo keliyi aad u dareento in uu taleefankaagu dhacayo.
In uu qofku yeesho saacado iyo maalmo ay naftu nasasho dareentaa waxa ay u fiicantahay caafimaadka, waxa ay u fiican tahay niyadda waxa aanay kordhisaa tamarta qofku uu fasaxa kaddib waajibaadkiisa ku qaadanayo, laakiin waxaa ceeb ah in qofku uu noqdo calaamad ka mid ah calaamadaha maqaaxida.
Iska jir in aad maalin kasta waqtiyo la yaqaanno fadhiisato hudheellada, ama hudheel keliya, waxa ay lumisaa waqti aad dano badan oo kale uga faa’iidaysan lahayd, waxa aanay kuu soo jiidaysaa sumcad darro iyo in dad badani kuu arkaan qof aan waqtigiisa uga faa’iidaysan karin waxa dantiisu ku jirto.
Kursi saaxiibkaa ku fadhiisto
Marar badan waxaa dhacda in qof aynu kula balanno maqaaxi, kaddibna inta aynu ka soo horreyno aynu qofkaas u sii qabanno kursi. Waa dhaqan ceeb ku ah ilbaxnimada, waa tallaabo cadaalad darro ku ah macaamiisha saaxiibkaa ka soo horreeya ee imanaya meheradda, waana meel ka dhac aad u geysanayso meheradda laftigeeda.
Marka ay maqaaxidu cidhiidhi tahay kursi kasta qofka u soo horreeya ayaa leh, saaxiibkaana marka uu yimaaddo ayaa ay tahay in uu kursi raadsado.
Talefanka iyo dalabka
Mudalabka ka shaqaynaya maqaaxidu kelidaa kuuma adeegayo, mana jeclaysanayo in waqti badan kaga lumo inta uu sugayo dhigista taleefanka aad ku hadlayso. Waxaa fiican in aad mudalabka ka caawiso sidii uu waqtigiisa uga faa’idayn lahaa, una raalli gelin lahaa dhammaan macaamiisha kala duwan. Waa dhaqan xun in qofka dalabka kaa qaadaya oo u taagan in uu kuu adeego, aad adigu taleefank ku hadasho.
Maqaaxida bannaankeeda ku dhammayso taleefanka, ama jar oo marka hore dalabkaaga sheego, kaddibna dib ugu noqo taleefanka.
Salaan dadka kuu adeegay
Waa dhab in aad lacagtaada ku iibsatay in laguu adeego, laakiin ogow in aanay lacagtu goyn karin karaamada aadamaha. waa dhaqan fiican in qofka kuu adeegayaa uu kaa dareemo soo dhoweyn iyo sinnaan aanad iska sarraysiinayn. Baro in aad qofka kuu adeegaya salaanto, una muujiso in aad tihiin laba ruux oo siman, farqiga u dhexeeyaana uu yahay keliya in aad tihiin iibiye iyo iibsade. Ama laba qof oo ganacsi dhex marayo.
Salaan mudalabka, si xushmayni ku dheehantahayna uga dalbo waxa aad rabto.